« Slam national » andiany faha-12: hiaraka handray ny hetsika i Toamasina sy Antananarivo | NewsMada
« Slam national » andiany faha-12: hiaraka handray ny hetsika i Toamasina sy Antananarivo
Hanome fitenenana ny rehetra. Izay ny tanjona voalohan’ny fikambanana Madagaslam, raha nanomboka voaloohany ny hetsika « Slam national » tamin’ny taona 2007. Mbola mipetraka hatrany izany amin’ity andiany faha-12, izay hotontosaina ny 25 novambra hatramin’ny 4 desambra ho avy izao.
Hampiavaka ity andiany faha-12 amin’ity hetsika nasionaly ho an’ny slam ity ny fivelarany ivelan’Antananarivo. Hatao any Toamasina mantsy ny hetsika amin’ny herinandro faharoa. Rariny ihany, satria samy avy any Toamasina na i Tokyo, filohan’ny fikambanana Madagaslam sy i Louis’Z, tompondaka tamin’ny fifaninanam-pirenena. Na izany aza, maka endrika ho hetsika iraisam-pirenena ho an’ny poezia hatrany ny “Slam national”, satria handray vahiny avy any Frantsa, Alemaina ary Gabon, ankoatra ireo avy any amin’ny faritra hafa toa an’Ambositra,, Antsirabe, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Sambava, Toliara ary Taolagnaro.
Ho an’ny eto Antananarivo manokana, hanomboka anio amin’ny 2 ora, amin’ny alalan’ny fidinana an-dalambe ataon’ireo mpanao slam ny hetsika. Samy haneho ny talentany ireo poeta isaky ny fijanonana. Hitohy amin’ny fampisehoana eny amin’ny La Teinturerie Ampasanimalo kosa izany ny hariva, amin’ny 6 ora sy sasany.